Firenena sy orinasa mpamatsy | Azia Pasifika Vaovao
Par Parameteran'ny vokatra】
Anarana: Face Shield
Fitaovana: Fantsom-bolo avo roa heny antonony mifangaro anti-zavona Pet
Làlan-doko: Blue, Red, Orange, sns
Habe: 32x22cm, 33x22cm na 35x24cm
Matevina: 0.24mm na 0.4mm.
Vokany fiarovana: nampiasaina ho an'ny famokarana isan'andro, ny vovoka, ny menaka avy any an-dakozia, ny fanoherana ny rano, ny fanoherana, ny fofona, ny fanafody tsy fitsaboana, fa tsy ny fitsaboana
Char Character Product】
1. Ity vokatra ity dia mampiasa ny alikaola mangarahara avo ho an'ny fitokanana ny tarehy rehetra ary miaro.
2. Ny vokatra dia maivana amin'ny lanja, avo amin'ny mangarahara, mahazo aina ny akanjo.
3. Fiarovana fiarovana, fahombiazana ambony fanakanana ny atete sy famafazana rano.
4. Ny fisorohana amin'ny fomba mahomby dia vokatry ny fahasamihafana eo amin'ny mari-pana sy ny etona rano.
5. Ny lafiny roa amin'ity vokatra ity dia rakotra sarimihetsika anti-statique.
【Lisitry ny fampiharana】
Ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro. Azo ampiasaina ao amin'ny biraon'ny asa, lakozia, lalana mando, fety lehibe, fihaonana sns.
Fiarovana anti-zavona avo Mitokana ny ampinga ampinga, be dia be any amin'ny banky, ny mpiasan'ny fitaterana, ny trano fisakafoanana ary ny toeram-bahoaka; Mandritra izany fotoana izany, ny ampinga Face dia manana fampisehoana anti-fog tsara ary manome fahitana mazava.
Introduction Fampidirana bebe kokoa】
1. Miaro tanteraka endrika: mangarahara, maivana, mahazo aina, mifoka rivotra, mety tsara amin'ny fiarovana ny maso, vava, orona amin'ny fofona manidina, droplet, aerosol, tsiranoka ary splatters.
2. Fitaovana Premium: PET vita amin'ny kalitao avo lenta. mateza sy azo ampiharina.
3. Maivana sy mahazo aina: samy manana tarika elamika sy headpa sponjy, tsara amin'ny akanjo lava. Ny fanoherana ny zavona sy ny foza dia manome fiononana fanampiny sy azo antoka amin'ny fanoherana ny tsiranoka sy ny setroka mankany amin'ny faritry ny tarehy.
4. Mahomby amin'ny fampihenana ny sela: Miaro anao amin'ny spray sy splatter ny ampinga fiarovana amin'ny tarehy. Miaraka amin'ny famolavolana ergonomika, ny ampinga miatrika fiarovana dia miasa ho an'ny ankamaroan'ny olona.
Alohan'ny fampiasana dia esory moramora ny sarimihetsika fiarovana mangarahara eo amin'ny andaniny roa amin'ny lens.
Report Tatitra fanandramana】
Previous: Coronavirus IgG sy IgM Test Cassette
Manaraka: Akanjo mpiaro
Aretina matevina azo tsapain-tanana
Miaro ny vovoka manohitra ny vovoka
Miaro amin'ny tarehy ny fanoherana ny vovoka
Ny menaka miady amin'ny menaka
Ny fanoherana ny vovoka manohitra
Miaro amin'ny tarehy amin'ny rano
Clear Shi Shield
Ny vovoka manaporofo ivelany ivelany Shield
Ny vovoka miaro amin'ny tarehy
Ny vovoka vita amin'ny vovoka
Tariby endrika-vovoka mihetsiketsika
Ny vovoka plastika vita amin'ny plastika
Solovan'ny tarehy matevina
Solovavan'ny tarehy ivelany ivelany
Miaro ny petra tariby
Solovavan'ny plastika vita amin'ny plastika
Miatrika mask Shield
Shiela fiarovana fiarovana
Miaro amin'ny fiarovana Shield
Fenon-tarehy feno Cover
Voaro amin'ny endrika fiarovan-tarehy feno
Fiarovana miaro feno
Full Shi Shield
Shiela endrika famaritana avo
Shield tarehy kalitao avo lenta
Mitokona tarehy Shi Shield
Miaro amin'ny endrika miaro amin'ny tarehy
Miaro amin'ny tarehy any an-dakozia
Shied-Proof Face Shied
Shiela tarehy mifono solika
Miaro ny biby fiompy
Miaro ny tavoahangy plastika amin'ny saka
Miaro ny tarehy amin'ny fiarovan'ny biby
Shiela tavoahangy plastika
Miaro amin'ny tavoahangy plastika
Miaro amin'ny tarehy amin'ny plastika
Fiarovana tarehy Shiita
Miaro ny akanjo vita amin'ny fiarovana Shiita
Miaro amin'ny tarehy miaro amin'ny tarehy
Sarotra saron-tava fiarovana
Miaro amin'ny tarehy ny fiarovan-tena
Azo alaina ny volon-tarehy
Miaro amin'ny tarehy Shiela
Miaro amin'ny tarehy mifangaro
Visorona Shiotra tarehimarika
Taribon-tarehy vita amin'ny rano
Akanjo fitsaboana fitsaboana, Rano Hdpe aprily amin'ny rano, Tariby endrika-vovoka mihetsiketsika, Fiakanjo fiarovana, Fiakanjo fiarovana, Water-Proof Apron,